Editorial : MAXAA DAWLADDA KMG AH U KEENAY GUULDARADA ?
By Abdullahi Farah Qasim
FAALLO GAABAN OO KU SAABSAN SABABIHI KEENAY XIISADDA MUQDISHO KA TAAGAN !
Laga soo bilaabo 25kii August ee sanadkii tagay oo ahayd maalintii lagu doortay Cabdiqassim Salaad Xasan magaalada Carta ee dalka Jabuuti ilaa iyo maanta, waxaa hubanti ah oo cad in Xukuumadda KMG ah ee uu madaxda uga dhigay Cali Khaliif ay si isdaba joog ah u turaan-turooneysay, khaasatanna dhinaca dhaqaalaha oo ay si weyn ugu hungowday. Xiisadda maanta ka ooggan Muqdisho ma aha mid cusub ama bilow ah ee waa mid ku timid xil iska yeelid la'aanta Xukuumadda KMG ah markii ay ka aqbashay ganacsato gaar ah oo la yaqaan lacag been abuur ah oo dhan balaayiin shillin oo kadibna sababay qiima dhac ku yimaada Shillinka Soomaaliga iyo sicir barar xad dhaaf ah oo aad u wiiqay awoodda wax-iibsiga ee danyarta .
Waxay kaloo aqbalidda lacagtaa been-abuurka qabri ugu noqotay Dawladda oo ku weyday kaalmadii yareyd ee ay dibedda ka heli jirtay . Waxaa kaloo jira oo si aad ah u dhaawacay sumcadda Dawladda KMG ah markii ay soo baxeen warar sheegaya in xoolihii lagau soo helay magaca qaranka la kala lunsaday, taasina ay dood ballaaran ka dhalisay baarlamaanka oo awalba ku saluugsanaa Xukuumadda KMG ah xisaab-xir la'aanta iyo sida uu ku baxay kharashkeeda.
Waxaa xusid mudan in dhawr jeer ay xubno ka tirsan baarlamaanka ku eedeeyeen Wasiirada ku-takrifalka xoolaha ummadda oo qaarkood iska caadeysteen inay dibadaha iska wareegaan iyagoo ku safra derajada koowaad (first class),qaarna ay dalkaba ka maqnaadaan saddex ilaa afar bilood,dishibiliin la'aanta jirta awgeed .
Dhanka sugidda amniga oo Xukuumaddu sheegtay inay ahmiyad weyn siiso, kharash culusina uu ku baxay , ayaa nasiibdarro ilaa iyo iminka waxba ka naaso caddeyn oo ma jirto maanta waddo toosan oo loo mari karo magaalada lafteeda, waayo meel kasta waxaa fadhiya ciiddan ku abtirsada hogaamiye kooxeedyada, taasina waa guuldarro weyn.
Ciidanka Dawladda oo dhan sida la sheego ilaa iyo labaatan Kun waa mid sida cad aan sugi karin nabadgelyada magaala madaxda Muqdisho, mana aha mid fulin kara xitaa awaamirtii Dawaladda ay ku bilowday canshuur ururinta, waana mid sida muuqata u taagan oo keliya in wax lagu cuno .
Waxaa ilaa iyo iminka Dawladda KMG ah ku soo biiray Maxamed Qanyare oo noqday Wasiirka Kheyraadka Badda & Kalluumeysiga oo sida la sheegay ciidankiisa aan ku soo darin kuwa Dawladda, kharash xooganna uu ku baxay soo xera-gelintiisa. Waana hogaamiye kooxeedka kaliya ee ku soo biiray Dawladda KMG ah, marka laga reebo Xuseen Bood oo ka diiday inuu jago ka qabto, marka waxaa is-weydiin leh waa maxay ujeedada ka danbeysa in Dawladda KMG ah ay la heshiiso hogaamiye kooxeedyada ka soo horjeeda, hadiiba aanay si taam ah ugu soo biireyn ? Hadaan wax ka iraahdo dhismaha maamulka Dawladda, waa mid aan fari ka qodneyn, waayo ma jirta Wasaarad qura oo ku jirta daartii ay lahaan jirtay ama leh shaqaale u gaar ah (personnal). Sidee baa maamul ku noqonayaa meelmar hadiiba aanu jirin wax aasaas ah ? Wasiir wata magaca Wasaarad aan jirin baa ! Waa arrin yaab leh .
Siyaasaddii Dawladda KMG ah ee ku dooneysay inay ku kasbato taageerada Dawladaha jaarka ah oo ay ugu horreyso Ethiopia ayaa noqday mid fashilmay. arrintaasna waa dib-u-dhac weyn oo ku yimid aqoonsiga Xukuumadda KMG ah, waayo heshiiskii labada dhinac ku dhexmaray magaalada Addis-Ababa horraantii sanadkan wuxuu ahaa mid gundhig u noqonaya ictiraafka amxaarada ee Dawladda ka jirta Muqdisho,taasina guul weyn ayeey u noqon lahayd Cabdiqassim, halka ay ka wiiqi lahayd awoodda hogaamiye kooxeedyada .
Sida dhabtu tahayna waxay Amxaaradu diyaar u ahaayeen inay wefdi u soo diraan Muqdisho, Safiirna u soo magacaabaan .Waxaana arrinkaa ka daliil ah mowqifkii haboonaa ee uu ka istaagay waagaa Danial Arab Moi hogaamiye kooxeedyada markuu u diiday inayba soo galaan dalkiisa, isagoo ku tilmaamay inay yihiin fidna wadayaalka Somalia, waxaana oran karnaa waa isla-socod ka dhexeeyay Ethiopia iyo Kenya marka la eego arrinta Soomaalia .
Tallaabadii xigtay ee Madaxweyne Moi waa ognahay markuu dhawr todobaad kadib inkiray jiritaanka Dawladda KMG ah, isla markaana xiray xuduudii labada dal ee Kenya/Somalia .
Taasina waxay ku timid xisaabtan la'aanta ka jirta maanta Muqdisho iyo iyadoonba jirin wax qorsha oo Dawladda u degsan, oo aan ka ahayn baahida maalintaa jirta mooyee. Isku soo wada dooboo waxay xaaladda guud ee Dawladdu noqotay mid murugo leh oo keentay in shacabkii danyarta ahaa uu adkeysan kari waayay, markuu waayay nolol , arrinkuna gaaray in ilaaladii Cabdiqassim ay rasaas ku dilaan dadweyne banaanbaxayay.
Taas ayaa keentay inuu afka furto Guddoomiye Cabdalla Deerow, una sheego Cabdiqassin in wax kasta ay xad leeyihiin . Bal aan eegno halka ay ku danbeyso dooda ka furantay Baarlamaanka ee ay kalsoonida uga ceshanayaan Dawladda KMG ah ee uu madaxda ka yahay Cali Khaliif Galaydh.